PG U & E cream 2010 Uploaded by polygold at Your Listen
PG U & E cream 2010
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."ခြေထောက်ကွဲခြ� ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - PG U & E cream 2010
polygold3uploads 1 followers0likes 104 activities
Tags: fmradiomyanmarheel crackcreamu and epgpolygoldu and e
ခြေထောက်ကွဲခြင်း၊ အသားမာတည်ခြင်း၊ အသားပတ်ခြင်း တို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ U and E Cream မှာပါတဲ့ Urea သည်ခြောက်သွေ့သောအရေပြားကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးသည်။ Vitamin E သည်အသားအရေကို ချောမွေ့စေပါသည်။
U and E Cream ကို Polygold ဆေးကုမ္ပဏီ ဖုန်း 01-229973 ၊ 01-229974 နဲ့ 02-39926 တို့မှာ လက်လီ ၊ လက်ကားဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။